Puntland oo xirtay Guddoomiye ku-xigeen ka tirsan Somaliland | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaPuntland oo xirtay Guddoomiye ku-xigeen ka tirsan Somaliland
Puntland oo xirtay Guddoomiye ku-xigeen ka tirsan Somaliland
Wararka laga helayo Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamo ka tirsan Puntland halkaas Xabsi ku yaalla ay ku xireen Guddoomiye ku-xigeenka degmadaas ee Somaliland.
Ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sugan Badhan ayaa xabsiga dhigay Cabdiraxmaan Axmed oo maamulka Somaliland ugu magacaawnaa Guddoomiye ku-xigeenka Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag.
Weli lama oga sababta Ciidanka Puntland u xireen Guddoomiye Cabdiraxmaan Aadan,waxaana Badhan qeybo mid ah ku sugan Ciidamo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Somaliland oo ay uga hadlayaan xariga loo geystay Guddoomiye ku-xigeenkii u joogay Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag.
Wararkii ugu dambeeyay Madaafiic lagu weeraray Madaxtooyada Soomaaliya
RW Kheyre oo booqday Ciidamo loo diyaarinayo howlgal ka dhan ah Al-shabaab + Sawirro